Dacwada Badda: Kenya Ma Ku Heli Kartaa, Ruqsa Bixinta Baarista Shidaalka, Xuquuqda Dhul-Badeed Aysan Lahayn? | JAMHURIYADDA
Home Dacwada Badda & Shidaalka Dacwada Badda: Kenya Ma Ku Heli Kartaa, Ruqsa Bixinta Baarista Shidaalka, Xuquuqda...
Dacwada Badda: Kenya Ma Ku Heli Kartaa, Ruqsa Bixinta Baarista Shidaalka, Xuquuqda Dhul-Badeed Aysan Lahayn?
Maxkamadda ICJ ayaa soo saartay jadwalkii dhageysiga dacwada Kenya iyo Soomaaliya iyadoo Soomaaliya u madashay inay soo bandhigto mudaca inta u dhexeysa 15ka ilaa 18ka bishan, halka difaaca Kenya la dhageysan doono 17ka ilaa 19ka March 2021. Isniintii March 8, ayaa wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisulwasaare Ku-xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed u ambabbaxay magaalada Hague ee dalka Holland.
Difaaca afka ee labada dhinac ayaa lagu soo bandhigi doonaa caddaymihii ay hore ugu gudbiyeen maxkamadda. Kenya ayaa ku andacooneysa in adeegsiga habka muqaalka fog uu dhaawacayo asturnaanata markhaatiyada Soomaalida ah oo ay keeni lahayd, si ay ugu maragfuraan kiiska.
Warar kutiri-kuteen ah ayaa sheegaya in laga yaabo in marqaatidu yihiin siyaasiyiin Soomaaliyeed, walow taasi u muuqato ihaanad hor leh oo lagu bahdilayo siyaasiyiinta. Xeeldheerayaasha sharciga ayaa rumeysan in, haddii ayba jiraan markhaatiyadaas, ay garyaqaannada Soomaaliya iyo dowladdaba xog-ogaal u yihiin.
Muranka ayaa salka ku haya jihaynta soohdinta Badweynta Hindiya ee labada dal. Kenya waxay ku doodaysa in xuduuddeeda ay xagal-jiifto si jasiiraddaha Lamashaaqa (Diua Damasciaca Islands) u soo martaan dhankeeda. Mowqifka Soomaaliya waxuu si cad ula socdaa midka soohdinta baddaha caalamka.
Balse waxaa layaab leh in taniyo maanta ay musharraxiinta madaxtooyada cambaareen la’yihiin xoogsheegashada Kenya, halka uu kooda afka furaba eedaynayo Dowladda Soomaaliya inay ka gaabisay dacwada badda amase, kaba daran, inay xumaysay xiriirka labada dal oo jaarka ah.
In Soomaaliya ay dacwad u gudbisay Maxkamadda ICJ, August 2014, ayaa kedis ku noqotay Kenya. Soomaaliya waxay ka daashay wadahadallo diblomaasiyadeed oo soo jiitamayay muddo 6 sanadood ah, si joogta ahna ula kulmayay dafiraadda Kenya. Kiiska oo seddax jeer dib loo dhigay ayey Nairobi damacday inay cudurdaar ka dhigato mar afaraad qalalaasaha siyaasadeed ee Muqdisho.
Wasiirraddii hore ee Arrimaha Dibedda Fawzia Yuusuf Xaaji Aadan oo la hadashay warbaahinta Ilays ayaa sheegtay in Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo qadiyadda badda ka dhaxlay Shariif Sheikh Axmed uu ka baqayay in barlamaanka ku eedeeyo inuu dib boorka uga jafayo mashruuc maamulkii ka horreyey uu ku fashilmay.
Ilo wargaleen ah ayaa sheegaya in shirweynihii 67aad ee Golaha Guud ee QM uu Madaxweyne Xasan Sheikh kula kulmay New York garyaqaan Muna Maxamed Cali Sharmaani. Qareenka waxay kula talisay inuu helo khabiiro ku xeel-dheer sharuucda badda oo u soo bandhigay fursaddaha u banaan.
Damaca Kenya waxuu ahaa inay dib u xariiqato sohdin-badeedka ay la wadaagto Soomaaliya qiilna ka dhigato heshiis ay la gashay Tanzania iyo Soomaaliya. Shidaalka ceegaaga ka sokow, aagga wuxuu leeyahay kalluun iyo muhiimad militeri, taas oo ah xuddunta khilaafka labada dhinac.
Seddax bilood ka hore inta aan la dooran Xasan Sheikh ayaa Kenya si sharci-darro ah u xaraashatay toddoba xirmood oo ku yaal dhanka Soomaaliya iyadoo ruqsad sahamin siiyay shirkadaha Eni Energy, Total, iyo Anadarko Petroleum Corporation, gorgortanna la gashay shirkadda Statoil ee Norway iyo mid isugu dhafnayd Qadar iyo Urdun (Reuters – July 2, 2012).
Kenya waxay filaysay in sidaas ay ku yeelan karto xuquuq dhul-badeed aysan lahayn. Balse, xukunka kiiska waxuu caddayn doonaa in ruqso bixinta dhul aadan lahayn aan lagu hanti karin.
Previous articleKenya Frames Somalia as Intruder in the Maritime Dispute
Next articleTurkey-Egypt Relations: What’s Behind Their New Diplomatic Push?